Otu esi eji otu weputa onu ogugu Nowgoal Data Grabber
Chọrọ ịma esi kee ozugbo ihe mgbaru ọsọ nchịkọta akụkọ maka ịkụ nzọ n'ịntanetị gị?
A na-akpọ sọftụwia ịkụ nzọ egwuregwu ọhụrụ a Nowgoal Data Grabber na ihe bụ isi ọ bụ onye na-egwuputa ihe data, n'echiche na ọ na-ejikọta ozugbo na saịtị ọnụ ọgụgụ a maara nke ọma Ugbu a.com ma na-ewepụta usoro data na akpaghị aka na peeji nke saịtị a, dị ka ọnụ ọgụgụ ihe mgbaru ọsọ e meriri na nsonaazụ ikpeazụ nke egwuregwu ahụ.
Na omume, inwe ike wepụ data sitere na 10 afọ gara aga, ekele Nowgoal Data Grabber ọ ga - ekwe omume imepụta ibu ebe ndebe akwukwo, bara ezigbo uru nye ndị niile na - enyocha ntọala metụtara ihe mgbaru ọsọ nke ìgwè ahụ n'oge egwuregwu na onye doro anya na nzọ dabere na data ndị a.
Otu esi emepụta ebumnuche ebumnuche: enchịkọta data
Tupu ịmalite iwu nke gị ihe mgbaru ọsọ nchịkọta akụkọ, ka na-amalite site na-ahụ ihe data ị ga-enwe ike iji na-akpaghị aka wepụ na a mfe click ekele a ọhụrụ software site ThatsLuck:
ụbọchị nke egwuregwu ahụ;
mmeri nke mmeri;
aha ndi otu ulo;
aha ndi otu nleta;
ọnụ ọgụgụ goolu ndị otu egwuregwu gbatara;
ọnụ ọgụgụ ihe mgbaru ọsọ ndị ọbịa nyere;
ngụkọta ihe mgbaru ọsọ e nyere na egwuregwu ahụ;
nsonaazụ ikpeazụ na usoro nke ihe mgbaru ọsọ zuru ezu;
nsonaazụ ikpeazụ na usoro nke akara 1-X-2.
Otu esi emepụta ebe a na-edekọ ihe mgbaru ọsọ: sọftụwia ahụ
Aga m amalite ozugbo na nkọwa nke usoro ihe omume ahụ: ihe mbụ dị n'elu Njikọ Njikọ ahụ agaghị agbanwe kpamkpam, n'ihi na ọ bụ eriri njikọ na saịtị Nowgoal.com
Le ihe mgbaru ọsọ a na-edepụta ya na peeji ndị metụtara onye na-ede akwụkwọ a maara nke ọma Bet365; maka ndị chọrọ ịnwale, site na iche akụkụ nke ederede ebe edere aha onye na-ede akwụkwọ, ọ ga-ekwe omume ịkọwapụta data sitere n'aka ndị na-eme akwụkwọ ndị ọzọ.
Ozugbo ị ga-ahụ ubi Họrọ Interbọchị Agbata nke ị ga-abanye na ụbọchị (ụbọchị) ịchọrọ ịmịpụta, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ egwuregwu niile nke afọ 2019, ị ga-abanye 01/01/2019 na mpaghara mbụ na 31 / 12/2019 na nke abụọ.
Wee pịa bọtịnụ aka nri nke ụbọchị (Data Grabber).
Kwụsị, ịkwesighi ime ihe ọ bụla ọzọ, n'ihi na Nowgoal Data Grabber ọ ga-ejikọ aka na saịtị Nowgoal (n'aka ekpe nke ihuenyo ị ga-ahụ peeji nke saịtị ahụ nke a ga-emeghe) kwa ụbọchị ọ ga-ewepụta data niile ị masịrị gị!
Ozugbo emechara usoro mmịpụta ahụ, ị ​​nwere ike ịchekwa ebe nchekwa gị, buru otu ebe nchekwa echekwara na mbụ, ma ọ bụ hichapụ data niile ejidere.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịmalitela iwepu data nke otu afọ (ana m akwado ka ị wepu otu ọnwa n'otu oge), ịnwere ike ibudata ma ọ bụ chekwaa ụlọ akwụkwọ ahụ, na-aga n'ihu na ntinye data nkwụsịtụ na mbụ; ya mere enwere ike imepụta elepụ anya nke ụbọchị, izu, ọnwa, wdg.
Iji igodo aka ekpe / aka nri ị nwekwara ike pịgharịa ndekọ ahụ site na nke mbụ ruo na nke ikpeazụ, dozie ha site na ịba ụba ụbọchị (Mee site na Datebọchị) na, na bọtịnụ ozugbo n'aka nri, ị nwere ike mepee folda ebe ebe nchekwa niile dị. echekwara (n'ụdị db Access).
Nowgoal Data Grabber: naArchive ntụgharị na Excel
N'elu aka nri ị ga-ahụ igodo kachasị mkpa, nke na-enye gị ohere ịchekwaaihe mgbaru ọsọ nchịkọta akụkọ weghaara na Excel dakọtara.
Ozugbo emere nke a, ị nwere ike imeghe faịlụ ahụ na Excel ma site na itinye ihe nzacha niile dị, ị nwere ike nyochaa n'ụzọ zuru ezu ihe mgbaru ọsọ nke otu otu iji mee ka ịkụ nzọ n'ịntanetị gị dị mma.
Nbudata Nbudata	NGDGrabber.zip - 54 MB